Cabsi laga qabo weerraro ka dhaca Afrika - BBC News Somali
Cabsi laga qabo weerraro ka dhaca Afrika
Waxaa sare u kacday cabsida laga qabo weerraro ay kooxaha mayalka adag ee Islaamiga ah ay ku qaadaan taageerayaasha kubadda cagta ee wadammada Afrika, Inta ay socdaan ciyaaraha adduunka.
Habeenkii Talaadada ugu yaraan 21 qof ayaa lagu dilay weerar bambaano oo ka dhacay waqooyiga Nigeria, xilli ay daawanayeen ciyaar ka tirsaneyd koobka adduunka.
Labada koox ee ugu waa weyn kooxaha lagu tiriyo argagixisada ee qaarada Afrika – ee Boko Xaraam iyo al-Shabaab – ayaa waxa ay ka digeen weerraro noocaas ah, iyagoo ku tilmaamay ciyaaraha in ay yihiin kuwo ka soo horjeeda diinta Islaamka.
Sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah, qof ismiidaamiyay oo watay mooto saddex lugood ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa habeenkii talaadada ku dilay 21 qof gobolka Yobe ee waqooyi bari ee dalka Nigeria.
Dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa waxa ay daawanayeen ciyaartii dhexmartay Brazil iyo Mexico.
Ilaa iyo haatan ma ay jirto koox sheegatay in ay ka dambeysay weerarka.
Hasayeeshee waxaa laga yaabaa in weerraradan ay yihiin kuwii ugu dambeeyay liis dheer oo weerraro ah oo ay kooxaha mayalka adag ee Islaamiga ah ka geystaan goobaha lagu daawado ciyaaraha.
In dadka ay isugu yimaadaan goobo fagaare ah oo ay ku daawadaan ciyaaraha adduunka ayaa waxaa laga mamnuucay qeybo ka mid ah waddanka Nigeria, oo ay ka mid tahay Yobe, sababtoo ah cabsi galin ka soo baxaysay kooxda Boko Xaraam awgeed.
Wadammada Bariga Afrika ayaa sidoo kale ku jira heegan sare oo ku aadan weerraro ay macquul tahay in ay soo qaado kooxda Soomaaliya ee lala xiriiriyo ururka Alqaacidah ee al-Shabaab, inta ay socdaan ciyaaraha adduunka.
Al-Shabaab ayaa mas’uul ka aheyd weerarkii bambaano ee ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado goob lagu daawado ciyaaraha kubada cagta, weerarkaas oo ay ka geysteen caasimadda Uganda ee Kampala, ciyaartii finalka ee koobka adduunka ee 2010-kii.
Isla sanadkaasi, kooxda al-Shabaab ayaa ugu goodisay dadka xiiseeya kubadda cagta ee ku nool Soomaaliya in haddii la qabto iyagoo daawanaya ciyaaraha adduunka la garaaci doono.
Al-Shabaab waa ay sii waday qaabkaasi ay kaga soo horjeedo ciyaaraha ilaa laga gaaray 2011-kii markaa oo ay gebi ahaanba ka mamnuucday ciyaaraha kubadda cagta goobaha ay maamusho.
Ciyaaraha kubadda cagta ayaa si weyn looga xiiseeyaa qaarada Afrika.
Qaar badan oo ka mid ah dadka xiiseeyana iskama ay bixin karaan kharashaadka qalabka guryaha la soo dhigto ee laga daawado ciyaaraha, oo waxa ay dadka isugu tagaan fagaare lagu daawado ciyaaraha caalamiga ah, meelaha qaarna lacago yar ayaa lagu galaa goobahaasi.
Balse taageerayaasha kubadda cagta oo kaliya ma ahan dadka la beegsado.
2012-kii, madaxii Guddiga Olambikada ee Soomaaliya iyo madaxii kubadda cagta ayaa ka mid ahaa 8 qof oo lagu dilay weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Muqdisho.